ဓါတ်ပုံဝါသနာရှင်များအတွက် GIF Camera apk - .::just for share::.
Home » android apps » ဓါတ်ပုံဝါသနာရှင်များအတွက် GIF Camera apk
ဓါတ်ပုံဝါသနာရှင်များအတွက် GIF Camera apk
မင်္ဂလာပါဗျာ GIF photo လို.ပြောလာရင် လှုပ်ရှားနေတဲ့ ဓါတ်ပုံလေးတွေ ဆိုတာလူတိုင်းသိကြမယ်ထင်ပါ တယ် တကယ်လို. video ဖိုင်တွေလိုမဟုတ်ပါဘူး ဘယ်တော့မှမရပ်ပါဘူး အမြဲတမ်းလှုပ်နေတာပါ
မသိ သေးသူများကတော့ ဒီနေရာ မှာလေ့လာနိုင်ပါတယ် ဒီပို.စ် မှာပါတဲ့ ဓါတ်ပုံမှာလဲ လေ့လာနိုင်ပါတယ် အိုခီ အဲ့ဒီလို GIF format ပုံလေးတွေကို ဆော့ဝဲလ်တွေနဲ.ပြုလုပ်ကြတာပါ အခုတင်ပေးမှာလေးကတော့အလွယ် ဆုံး Android မှာပါတဲ့ ကင်မရာလေးနဲ.ပဲ gif ပုံလေးတွေဖန်တီးလို.ရမဲ့ android apk လေးပဲဖြစ်ပါတယ် ဒီကောင်လေးကိုတော့ ဗီဒီယိုရိုက်သလို ရိုက်ယူပြီး လှုပ်ရှားမှုအနှေးအမြန် ပြန်ချိန်ပြီး လွယ်ကူစွာပြုလုပ်နိုင် မှာဖြစ်ပါတယ် ဒါ့အပြင် တခြားအသုံးပြုနိုင်တဲ့ အပိုင်းတွေနဲ. ဖိုင်ဆိုဒ်ကလဲ သေးသေးလေးမို. အပျင်းပြေ ပဲဖြစ်ဖြစ် ၀ါသနာအရပဲဖြစ်ဖြစ် ဘာမဆိုသိထားအောင်လေ့လာချင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် အောက်မှာပေးထားတဲ့ လင့်မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါပြီ Android Version 1.6 နဲ.အထက် အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် ...........